Ibhokisi yokugcina yendalo yoqalo enokugcina iitheyibhile kunye nezinye izinto zomvelisi kunye nomzi mveliso | Uqalo olude
Ibhokisi yokugcina yendalo yoqalo inokugcina i-tableware kunye nezinye izinto
Injongo ye-1: Imulti drawer inokusetyenziselwa ukugcina izinto ezincinci ezinje ngetheyibhile, ubucwebe, izinto zokubhala kunye nezixhobo. Ingasetyenziselwa ekhitshini, kwigumbi lokuhlala, kwigumbi lokulala nakwigumbi lokusebenzela njl.njl Kufanelekile ekusetyenzisweni kweentlobo ezininzi zezinto kwizihlandlo ezininzi.
2．Expandable kunye adjustable cutlery umququzeleli: yokubeka yethu yokubeka ine uyilo adjustable kunye 3 ukuya 5 amagumbi. Amagumbi amabini anokwandiswa anokunceda ekucwangciseni zonke izinto zakho zokusika, izixhobo zokusika kunye nesilivere. Igumbi eliphakathi elongeziweyo liya kunceda ukugcina izinto ezinkulu.
3．Indlela yokugcina nefanelekileyo yokugcina: Lo mququzeleli woqalo unokugcina izinto ezincinci kumacandelo. Kulula ukuthatha izinto kwaye ugcine ixesha lokukhangela izinto ezinje ngeepuni kunye neemela, iipeni kunye neerula, izacholo zomqala kunye neewotshi.
Isakhiwo esomeleleyo se-4． kunye nemisebenzi ekulula ukuyigcina: Esi sixhobo sekhitshi sisebenza ngokuqinileyo ngokwaneleyo ukuba singagcinwa kwindawo efanelekileyo. Ngapha koko, kuthatha kuphela imizuzu emi-5 ukucoca kunye nokugcina itreyini yokusika. Sula ngokukhawuleza ibhokisi yokugcina i-bamboo ngamanzi afudumeleyo, emva koko usule ngokulula ngelaphu elifumileyo.
Le bhokisi yokugcina i-drawer yenziwe nge-bamboo eyi-100%, yomelele kwaye ayinamanzi, kwaye inokumelana neminyaka yokusetyenziswa.
Ubungakanani 280-460 * 355 * 65mm
Umthamo Iiyure ezingama-64.64
Ubungakanani beCarton 570 * 365 * 140mm
Iyalayisha 4PCS / CTN
Ubunzima bokuqala Malunga ne-1.5kg
Kwigumbi lokulala ungagcina izacholo zomqala, izacholo, amacici, iintsiba kunye nezinye izinto zokuhombisa. Ekhitshini ungagcina iimela, iifolokhwe, iipuni kunye nezinye izinto zeetafile. Eofisini ungagcina iipeni, iteyiphu, iirula, ii-stapler, kunye ne-glue stick. Ingasetyenziselwa ukugcina izixhobo zehardware, ezinje ngeewrenji, izikrufu, iimela zokusetyenziswa, njl.
Uluhlu olubanzi lwesicelo, ubungakanani obunokuhlengahlengiswa, obulungele iidrowa ezahlukeneyo.
Egqithileyo Ibhokisi yoqalo lwekhitshi yokugcina imfoloko yecephe kunye ne-tableware
Okulandelayo: Abaququzeleli be Bamboo Ikhitshi leSilverware elinamaGumbi ama-5
I-Bamboo Cosmetic Makeup Holder (Bamboo wendalo)
Ibhokisi yokugcina uqalo ngesiciko inokugcina iti ...
Ibhini yoGcino oluQinisekisiweyo (i-Natural Bamboo)
Natural bamboo ibhokisi yokugcina ngesiphatho can stor ...
I-bamboo Cwangcisa itreyi enamagumbi ama-4